Big Sur yave kuda kuvhura asi Apple ichiri kuburitsa inogadziridza kune macOS Catalina. Mune ino chinyorwa tichave tichitarisa yekupedzisira yekupedzisira macOS Catalina (iyo yanga ichiwanikwa kurodha pasi paMacs kubvira Muvhuro 7 Gumiguru).
Tichaongorora matambudziko akasiyana iwe aungave wakasangana nawo naCatalina uye tichakurukura kuti riini uye kana zvakagadziriswa naApple mune yakagadziridzwa. Tichataurawo kuburikidza nezvitsva zvitsva zvakasvika naCatalina. Verenga pamusoro pane zvese zvaunoda kuti uzive nezve macOS 10.15, aka Catalina.
Vagashiri vekutanga vakasangana nematambudziko akasiyana siyana, kubva kumaapps asisiri kushanda, kumatambudziko kubhowa, nyaya neICloud, uye kurasikirwa kana kudonhedza WiFi neBluetooth kubatana. Mukuwedzera vamwe vevaya vanofara nezve kugona kushandisa iyo iPad seyechipiri skrini nekuda kwechinhu chitsva cheSidecar vakawana vasingakwanise kuti chishande.
Neraki Apple yakagadzirisa zvakasiyana kuCatalina pamusoro pemwedzi yakatevera kuburitswa kwayo kwekutanga. Asi mamwe matambudziko akaunzwawo. Semuenzaniso, iyo 24 Kurume yekuvandudza (Catalina 10.15.4) yakawedzera mashoma mashoma - kunyanya bhagiri muCatalina 10.15.4 yaive ichikonzera maMac kupunzika zvichitevera kufambiswa kwefaira kwe30GB kana kupfuura. Unogona kuverenga zvakawanda nezve izvo pazasi.
macOS 10.16.7 yakasvika mukupera kwaSeptember 2020 yakagadzirisa grafiki dambudziko neiyo nyowani iMac. Kune rumwe ruzivo nezve iyo yazvino kuvandudza kuCatalina uye chii chichaunza kune yako Mac pazasi.
Nekudaro, kunyangwe muchiedza chepamusoro, iyo Catalina yekuvandudza inounza mamwe akanakisa maficha maficha kuMac anosanganisira kugona kushandisa iyo iPad seyechipiri skrini, iyo TV app, uye iyo Music app (iyo inotsiva iTunes.) Mamwe maapplication kuwana tarisiro munguva ino kutenderera kunosanganisira Mifananidzo, Safari, Tsamba, Zviyeuchidzo, uye ScreenTime. Tine ruzivo nezve zvese izvi, uye zvimwe zvinhu zvitsva muCatalina, pazasi.
Isu zvakare tine rumwe ruzivo rwe iyo zvitsva muCatalina mukutenderera kwedu macOS matipi pano. Iwe ungade kutsvaga nezve iyo nyowani vhezheni ye macOS 11 mune yedu Big Sur ongororo - uye Big Sur inofananidzwa sei naCatalina.
Dzazvino vhezheni ye macOS Catalina
macOS Catalina yasvika asi hazvireve kuti Apple yapera neiyi macOS yekuvandudza. Iyo kambani iri kuenderera mberi nekunatsiridza nekuvandudza software uye ichave ichiwedzera maficha nyowani nekugadzirisa matambudziko mukati memwedzi mishoma inotevera.
Tinogona kuwana imwe pfungwa yezvatinotarisira kubva kunotevera kuvandudzwa kuCatalina nekutarisa yazvino beta vhezheni yesoftware. Kana iwe uri mugadziri akanyoresa kana kusaina kune yeruzhinji beta iwe unogona kurodha beta yazvino yeCatalina izvozvi. Tsvaga kuti ungawana sei kopi yeiyo macOS beta pano.
Iyo yekuvandudza inonzi inogadzirisa Graphics matambudziko kuve neruzivo nevaridzi ve27in iMac neiyo Radeon Pro 5700 XT kadhi yemifananidzo.
Iyo inogadzirisawo nyaya apo macOS yaisazongoerekana yabatana neWi-Fi network uye inogadzirisa nyaya inogona kudzivirira mafaera kuyananisa kuburikidza neICloud Drive.
macOS 10.15.6 Kuwedzera Kwekuvandudza
Pakati paAugust Apple yakaburitsa yekuwedzera yekuvandudza iyo inofanirwa kugadzirisa dambudziko panogona kugadziriswa zvirongwa zvakaita seParlellels uye VMware.
Zvinoenderana neforamu yeVMware, tsaona idzi dzakakonzerwa nebug muApp Sandbox, chinhu chinotadzisa kuwana zviwanikwa zvehurongwa.
Apple yakaburitsa macOS Catalina 10.15.6 pakati paChikunguru 2020. Yaisanganisira dzakasiyana siyana dzekuchengetedza tweaks uye dzimwe shanduko dzekuvandudza kuvimbika kweMac yako, sekureva kwaApple.
Iyi yekuvandudza yakaita kuti zvikwanise kuwedzera vhidhiyo kutenderera pane HDR-inoenderana Mac notibhuku - izvi zvinofanirwa kuvandudza hupenyu hwebhatiri, sekureva kwaApple.
Iyo yakagadzirisawo nyaya panogona kushanduka zita remakomputa mushure mekuisa software yekugadzirisa uye kugadzirisa nyaya apo dzimwe mbeva dze USB uye trackpads dzinogona kurasikirwa nehukama - sezvakakurukurwa pano: Vashandisi vanotaura nyaya dze USB neMacBook Air nyowani uye MacBook Pro.
Nekudaro iyo yekuvandudza yakaunza dambudziko ne virtualisation zvirongwa zvinogona kushandiswa kumhanya Windows pane Mac.
Iyo 10.15.5 macOS yekuvandudza yakaunza nyowani ficha uye zvimwe zvebug fixes.
macOS 10.15.5 yaisanganisira kugadzirisa kune dambudziko apo "Dhata hombe kuendesa kune RAID mavhoriyamu haichakonzere Finder kuti isaterera". Iyi ndiyo inoburitsa ne macOS 10.15.4 yakatsanangurwa pazasi - isu tine ruzivo rwe gadzirisa iyo Finder yekurovera nyaya pano.
Chimwe chezvinhu zvitsva mu10.15.5 yaive Battery Health Management ficha iyo inodzivirira iyo bhatiri kubva kubhadhariswa kusvika ku100 muzana kuitira kuti iwedzere hupenyu hwehutachiona hwe lithiamu-ion.
Vashandisi zvakare vanowana sarudzo yekudzora otomatiki mukurumbira wemavhidhiyo mataera paGroup FaceTime mafoni.
Zvinotaridza kuti iyi vhezheni ye macOS zvakare inounza dambudziko kune backups.
Tine rumwe ruzivo rwakawanda nezve iyo yekuvandudza pano: macOS 10.15.5 Catalina inovandudza bhatiri hutano & inogadzirisa Tsvaga bug.
macOS 10.15.4 Kuwedzera Kwekuvandudza
Yekuwedzera kumusoro yakapihwa musi wa8 Kubvumbi iyo yaisanganisira iyo FaceTime bug fix uye imwe MacBook Air 2020 yekuvandudza. Nehurombo haina kugadzirisa nyaya dzese ne macOS 10.15.4.
Apple's kuburitsa manotsi akaratidzira shanduko dzinotevera:
Inogadzirisa nyaya uko Mac makomputa anomhanya macOS Catalina 10.15.4 aisakwanisa kutora chikamu muFaceTime kufona nemidziyo inomhanya iOS 9.3.6 uye pakutanga kana OS X El Capitan 10.11.6 uye nekutanga
Inogadzirisa nyaya uko iwe yaunogona kuramba uchingogamuchira password kukurumidza kune iyo Hofisi 365 account
Inogadzirisa nyaya uko MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) inogona kuturika muSetup Mubatsiri kana kana ichibvisa nekubatanidzazve 4K kana 5K yekunze kuratidzwa
Inogadzirisa nyaya uko chiteshi che USB-C muMac yako chingave chisingateereri
macOS Catalina 10.15.4 yakadzoserwa musi wa24 Kurume. Nehurombo kwaive nevamwe matambudziko akakomba neMacOS Catalina 10.15.4 sezvakakurukurwa pano.
Kunze kwematambudziko, iyi yekuvandudza yakawedzera rutsigiro rwemazwi-anowirirana mazwi evanyoreri veApple Music mune yeMusic app. Kune zvakare nyowani Screen Nguva Yekutaurirana Limit uye kugadzirisa kune iCloud Folder Kugovana.
Vhezheni 10.15.3 yakabuda munaNdira 2020. Yaive diki diki yekugadzirisa pamwe negadziriro dzebug uye dzimwe shanduko dzevashandisi ve16in MacBook Pro
Apple yakaratidza shanduko mbiri mune yekuvandudza:
Inogadzirisa gamma inobata yakaderera grey mazinga paPro Ratidza XDR ye SDR yekuyerera kwekushanda kana uchishandisa macOS
Inonatsiridza yakawanda-rwizi vhidhiyo yekugadzirisa kuita kweHEVC uye H.264 yakadzvanywa 4K vhidhiyo pane 16-inch MacBook Pro (2019)
Shanduro 10.15.2 yakasvika muna Zvita 2019. Iyo yekuvandudza yaisanganisira nyowani yeApple News + marongero, kuvandudzwa kweStock app, Music app bug fixes, iyo iPhone inogona ikozvino kudzora iri kure maMusic neTV maapp paMac. Kune zvakare maPikicha uye eMail bug bug fixes.
Paive zvakare neshanduko munzira iyo macOS inobata nayo HTTP Dziviriro dzakasimba, zvinoreva kuti iwe unofanirwa kugara uchiona https: // pane http: //.
Yakagadzirisawo nyaya yekuchengetedza pazvinogoneka kuverenga zvirimo zvakavanzika maemail nekuti kopi inowanikwa inowanikwa yakachengetwa mufaira rinoshandiswa naSiri. Zvimwe pane iyo nyaya pazasi.
mac OS 10.15.1 yakaburitswa musi wa29 Gumiguru. Iyo yekuvandudza yaisanganisira anopfuura makumi manomwe emoji nyowani, rutsigiro rweiyo nyowani AirPods Pro, HomeKit Yakachengeteka Vhidhiyo uye HomeKit router rutsigiro, uye matsva Siri magadzirirwo ayo anotendera iwe kumisa Apple uchishandisa yako Siri kudyidzana kuti ibatsire iyo kugadzirisa Siri.
Kubva pane iyo beta vhezheni isu taitarisira zvinotevera:
Nyowani Emoji - 50 emoji nyowani, kusanganisira nzira yekushandura ganda reganda revanhu vari mumawadhi emoji.
Photos - Panofanirwa kuve nesarudzo nyowani dzefirita uye new Title / Metadata maonero.
Siri - sekune neiyo iOS yekuvandudza, iwe unozogona kusarudza kubuda kubatsira Siri kuvandudza (nekusatumira marekodhi ehurukuro dzako).
Iko kune zvakare kugadziriswa kwe bug, kunyange zvisiri kujeka kuti mangani ematambudziko evashandisi aakasangana nawo neCatalina akagadziriswa. Semuenzaniso, zviri pachena kuti pave paine dzimwe nyaya nemaGPUs neCatalina, hatina chokwadi kana iyi gadziriso ichaenda chero nzira yekugadzirisa izvozvo. Idzi dzinotevera nyaya dzinogadziriswa neyekuvandudza:
Inodzoreredza kugona kuona mazita emafaira mune ese Mapikicha kuona muMifananidzo
Inodzoreredza kugona kusefa nezvinodiwa, mapikicha, mavhidhiyo, akagadziridzwa, uye mazwi akakosha muMazuva ekuona muMifananidzo
Inogadzirisa nyaya uko Meseji yaizongotumira chiziviso chimwe chete kana sarudzo yekudzokorora yambiro yakabvumidzwa
Inogadzirisa nyaya yakakonzera Kutaurirana kuti itange kune yaimbovhurwa nhare panzvimbo peye runyorwa rwekutaurirana
Inowedzera maviri-chigunwe swipe chiratidzo chekudzokera kumashure muApple News
Inogadzirisa nyaya dzinogona kuitika muMusic app paunenge uchiratidza zvinyorwa mukati memafolda uye nziyo dzichangowedzerwa mune Rwiyo runyorwa
Inovandudza kuvimbika kwekutama iTunes raibhurari dhatabhesi muMumhanzi, Podcasts, uye maTV maapp
Inogadzirisa nyaya uko mazita akadhirowewa anga asingaonekwe muDownloader folda muTV app
Paunenge uchishandisa yakavakirwa-mukati keyboard ine isiri-US dhizaini dhizaini, mapassword ane mamwe mavara haacharambwe paMac login hwindo.
Kana kusaina neApple ID kusingabvumidzwe neyakagadziriswa mbiri, iyo Sign In bhatani muSystem Preferences ikozvino yasviba.
macOS 10.15 Kuwedzera Kwekuvandudza
Iyo 10.15.1 yekuvandudza yakanga isiri yekutanga Catalina kugadzirisa. Pa 15 Gumiguru 2019 Apple yakaburitsa a yekuwedzera yekuvandudza kune macOS 10.15. Kunyangwe ichi chisiri chekudzokorora poindi, kuisa iyo yekuwedzera yekuvandudza inoda kutanga patsva.
Zvinyorwa zveApple zvinoti "Iyo MacOS Catalina Yakawedzera Yekuvandudza inosanganisira kumisikidza uye kuvimbika kuvandudza uye inokurudzirwa kune vese vashandisi."
Apple inoratidza kuti iyo yekuvandudza inofanira kuunza zvigadziriso zvematambudziko anotevera:
Inovandudza kumisikidza kuvimbika kweMacOS Catalina paMacs ine yakaderera disk nzvimbo
Kugadzirisa nyaya yakadzivirira Setup Mubatsiri kubva kupedzisa panguva yekumwe kumisikidzwa
Inogadzirisa nyaya inodzivirira kubvuma iCloud Mitemo uye Maitiro kana akawanda maaccount maakaundi akapinda mukati
Inovandudza kuvimbika kwekuchengetedza Game Center data kana uchitamba Apple Arcade mitambo isingaenderane
Ini ndinofanira kuisa macOS Catalina?
Zvakanaka, zviri pachena kuti pave paine matambudziko neCatalina (isu tichaenda kune rumwe ruzivo nezve iwo pazasi) asi Apple yakatoburitsa imwe yekuwedzera Yekuvandudza uye imwe yekuvandudza iri munzira, saka kambani iri kugadzirisa nyaya nekukurumidza.
Kana iwe uchida kuisa Catalina iwe unogona kuve wakachenjera kumirira kusvikira zvajeka kuti nyaya mushanduro yazvino yatariswa.
Kana iwe ukavimba nemaapplication anogona kunge asingashande muCatalina usaise macOS - kana tarisa nzira yekuimhanyisa tandem neMojave. Tinokurudzira kuisa Catalina pane rakasiyana vhoriyamu, zvinoshamisa kuti zviri nyore. Verenga: Maitiro ekuita maviri boot macOS mamwe mashoko.
Matambudziko nemabhugi muCatalina
Tichanyora nyaya pano, ndapota ziva kuti tinotarisira kuti Apple igadzirise nyaya dzazvino uye kuti zvimwe zvinongedzo zvaratidzwa pano zvichave zvakagadziriswa mumishumo inotevera.
Finder inopaza: Bug muMacOS Catalina 10.15.4 iri kukonzera kuti kuteedzera kwemafaira makuru kuve kunonoka zvisina kujairika uye kunogona kutokanganisa Tsvaga. Mamwe ruzivo nezve iyi nyaya pano: MacOS Catalina bug inokonzeresa Finder tsaona.
Nharo dzehope: Mamwe maMac ari kusangana nekernel panics paanomuka kubva kuhope.
Zvidhudhudhu zvakaoma: Kune mishumo yekunze yakaoma dhiraivhu yakabatana neanorara Mac anotanga kutenderera kumusoro uye pasi pasina chikonzero.
Tsamba yekunyora tsamba: Apple yakabvuma kuti yakanga ichiziva nezvenyaya iyo isina kunyorwa zvinyorwa zveemaimeri akavharidzirwa zvaichengetwa mufaira rakawanikwa naSiri kune tailer mazano. Kunyange iyi faira yaizongowanikwa chete kune mumwe munhu aikwanisa kuwana Mac yako, ichiri nezve. Iye IT-nyanzvi akawana chikanganiso, Bob Gendler, akawana nyaya muna Chikunguru uye anoti Apple haina kumupindura kusvika 5 Mbudzi. Apple Akaudzwa Iyo Verge kuti inoziva nezve nyaya uye ichagadzirisa. Apple yakaratidzawo kuti zvikamu zvemaemail chete zvinochengetwa Kana iwe uchinetsekana nezvechengetedzo ramifications zano nderekuti iwe uvhure System Kufarira uye tinya paSiri> Siri Mazano uye Yakavanzika> Tsamba uye osarudzira "Dzidza Kubva kuApp." Mukuwedzera iwe unogona kuvhura File Vault, iyo inonyora zvese paMac yako. Iyi nyaya yaive iripo kuCatalina, Mojave, High Sierra, neSierra.
Matambudziko ekuisa: Kana uine matambudziko panguva yekuvandudza maitiro isu tinopa mamwe mazano pano: Maitiro ekugadzirisa Mac yakanamatira kuisa macOS. Apple yakanyatsogadzirisa akati wandei matambudziko neiyo yekuisa maitiro muna 15 Gumiguru Yekuwedzera Gadziriso yataurwa pamusoro.
Sidecar inotsigira nyaya: Vamwe vanhu vari kuona kuti izvo zvakavimbiswa Sidecar maficha hazvisi kushanda. Izvo zvinofanirwa kuve zvinobvira kubatanidza iyo iPad kune Mac kuti uishandise seyechipiri skrini, asi vamwe vanhu vari kuwana mhosho iyo "Service Isingatsigirwe". Zvinogoneka kuti Mac yako haitsigire chimiro kana kuti iyo iPad haina kutsigirwa, yeisina kuvandudzwa kuPadOS Tsvaga kana yako iPad neMac zvinoenderana neSidecar pano: Mashandisiro ekushandisa iyo iPad seyechipiri skrini yeMac.
Zvirongwa hazvishande: Kana iwe uchiri kushandisa 32-bit maapplication haashande muCatalina. Zvingangodaro kuti iwe unofanirwa kugadzirisa kune yazvino vhezheni, pane kuti iyo software yekuvandudza ive ichikanganisa, asi izvi zvinogona kunetsa kana iwe ukavimba neapp iyoyo uye usingade kusaina chirongwa chekunyorera (sezvazviri nyaya nemaapplication mazhinji mazuva ano: Microsoft Office, Adobe CC).
Iko kune zvakare mukana wekuti mamwe maapplication amire kushanda mumugwagwa sezvo Apple yakakumbira kuti ese maapps izvozvi anofanira 'kusainiwa' kuti vashande paMac. Pakutanga izvi zvaingoshanda kune maapps akatengeswa paMac App Store, asi ikozvino maapplication ese achazoda mvumo kubva kuApple vasati vamhanya Kana iwe ukaona iyo: '[App] haina kugadzirirwa yako Mac uye inoda kuvandudzwa' ichi ndicho chikonzero nei. Tine chinyorwa ichi nezve maapplication ayo asingashande muCatalina, uye heino zvekuita nezve izvo 'Hazvina Kugadzirirwa yambiro yako Mac'.
DJ maapplication: DJs vari kugunun'una kuti maapplication avo haasi kushanda nekuda kweshanduko munzira iyo Mimhanzi inobvumidza playlists nevechitatu-bato maapplication. Zvinotaridza kuti iyo yeMusic app haibvumire yechitatu-bato maapplication kuyananisa playlists nenzira imwecheteyo yakaita iTunes. Izvi zvinoreva kuti wechitatu-bato maapplication ari kufanira kugadzirisa nyaya iyi. Shanduro nyowani dzaSerato's DJ Pro uye DJ Lite vatouya avo vanogadzirisa iyi nyaya.
Akawanda Apple ID zvikumbiro: Unogona kusangana nezvikumbiro zvakawanda zveApple ID yako. Isu takaona iwo meseji kashoma mushure mekuisa Catalina uye taifanirwa kunyora mukati medu ruzivo pane mashoma nguva. Mushure mekunge mashoma aenda isu takamira kuona meseji, asi kana usingaite iwe unogona kuenda kuSystem Preferences> Apple ID> iCloud Wobva waisa yako Apple ID uye password pano.
Wi-Fi neBluetooth nyaya: Kana yako Mac isina kubatana neWi-Fi kana Bluetooth, ot kubatana kwacho kunoramba kuchidonha, edza kudzvanya paWi-Fi / Makoni eBluetooth mumenu yemenu kuti uvadzimise zvakare.
iCloud nyaya: Vamwe vanhu vakashuma iCloud isingawanikwe mushure mekuisa Catalina. Kune zvekare mishumo yekuti haasi mafaera ese akatorwa pasi kubva kuICloud Drive. Iyi ingangoita bug iyo ichagadziriswa munguva pfupi iri kutevera.
Peripherals isiri kushanda: Kana mbeva yako, keyboard, purinda kana imwe gadget yamira kushanda izvo zvinogona kunge zviri nekuti vatyairi vane 32-bit. Tsvaga kana paine yekuvandudza mutyairi, uye kana zvisiri iwe uchafanirwa kugadzirisa izvo zvinowoneka.
Isinga peri-log-in / password zvikumbiro: Pakave nekunyunyuta kwekunofanirwa kugadzirisa marongero eID, kuisa iCloud mapassword, kubvumirana nemitemo, izvo zvakanaka kamwe, asi zvinoita sekunge vanhu vari kuona izvi zvikumbiro kakawanda. Zano iri ndere kubuda uye kupinda mukati zvakare, asi zvirokwazvo kubuda paICloud kunogona kukanganisa zvinhu zvakasiyana zvakachengetwa mugore, zvinova zvinonetsa.
Tsamba Isipo: Vamwe vashandisi vataura nezveMail data kurasikirwa mushure mekuisa Catalina Kana iwe uine rombo rakaringana kuve neTime Machine backup iwe unogona kukwanisa kuendesa yako Email backup kubva kuTIme Machine. Enda kuFaira> Tumira Mabhokisi eMaira uye tsvaga iro rakatsigirwa bhokisi retsamba.
Virtualisation matambudziko: Izvi zvakagadziriswa muAdvancedal Update kune macOS Catalina 10.15.6.
Zvitsva maficha mu macOS Catalina
Zvisinei nenyaya dzataurwa pamusoro apa, pane zvakawanda zvakanaka muMacOS Catalina, uye zvikonzero zvakawanda zvakanaka zvekugadzirisa. Izvi ndizvo zvaunogona kutarisira kubva kuCatalina.
Purojekiti Catalyst: iOS maapplication paMac
Tichatanga pamwe nechakanyanya kunakidza chidimbu chenhau chevashandisi veMac (uye chinotonyanya kufadza kune vanogadzira). Apple iri kuita kuti zvive nyore kune vanogadzira kuisa iOS maapps kuMac. Izvi zvakanaka kune vanogadzira sezvo ivo vasingazoda kushandisa nguva nemari kunyora kodhi kune maviri akasiyana maapplication. Uye zvakanaka kune vashandisi veMac nekuti ivo vanozoona kuwedzera kwemaapplication anowanikwa pane Mac chikuva.
Nepo iOS uye macOS vachigovana zvakajairika nheyo, hazvisi nyore kutakura iyo iOS app kuMac nekuti iwo maviri mushandisi maficha akatosiyana. "Kutakura app kubva kune imwe kuenda kune imwe kunosanganisira rimwe basa," akadaro Craig Federighi kumashure muna 2018.
Apple yawana nzira dzekuteedzera mamwe maitiro, semuenzaniso, kudhonza uye kudonhedza, kuti vakwanise kududzirwa kuMac. Kudzoka mu2018 Apple yakatumira pamamwe ayo maapplication kubva kuIOS kuenda kuMac - Nhau, Kumba neStoko - uchishandisa nzira nyowani. Muna 2019 kunyangwe mamwe maApple maApple eApple anogona kuwanikwa paMac: Mumhanzi, TV, uye Podcasts kutumidza mashoma.
Nekubatanidza kuvandudzwa kweapp kunotarisirwa kuti yechitatu-bato Mac maapps ichagadziriswa kakawanda. Parizvino, mari zhinji yekuvandudza inoenda kune maapplication eIOS.
A Kurume 2019 Bloomberg ripoti yakaratidza kuti purojekiti inozopedzisira yabvumidza vagadziri kugadzira imwe app inoshanda kune ese iPhone, iPad, uye Mac zvishandiso, asi kugona ikoko hakuzosvika kusvika 2021. Parizvino yakanyanya kutarisana nePad uye Mac.
SDK nyowani yeApple parizvino inobvumira vanogadzira kuti vatore maapps avo epaMacs Pachave paine maapplication maviri akapatsanurwa, asi vanogadzira vanofanirwa kungonyora kodhi yepasi kamwe chete.
Catalyst yakavakirwa muXcode. Zvese zvinogadzirwa zvinofanirwa kuitwa kutarisa Mac bhokisi padivi pe iPhone ne iPad uye Xcode ichavaka mukutonga uye windows kuzvidzora. Izvi zvinoreva kuti rimwe timu rekusimudzira rinogona kuvaka iyo imwechete app ye iPhone, iPad uye Mac.
Mumwe anovandudza uyo akatoshandisa Catalyst ndiTwitter, uyo ari kuunza iyo yemuno Twitter app kuMac izvozvi nekuti ivo vanongoda chete rimwe rekusimudzira timu yezvose zvishandiso.
Saka, izvi zvese zvinorevei? Iwe haugone kumhanyisa iOS paMac yako, kana macOS pane yako iPhone kana iPad, asi iwe unofanirwa kukwanisa kumhanyisa mazhinji maapps aunoshandisa pane yega yega kifaa - sekureba sekunge mushambadzi anoatakura iwo pamusoro. Maitiro ekuburitsa maapplication acharerutswa, saka vagadziri vane tarisiro yekuda kuzviita.
Purojekiti Sidecar: Shandisa yako iPad seye skrini kune yako Mac
Catalina zvakare inounza Sidecar, zita raApple remaitiro ekuti iyo iPad ingangoshandiswa seyechipiri kuratidza, kana seyakajeka piritsi. Tichatarisa mashandisiro maviri etekinoroji yeSidecar zvakasiyana.
Shandisa iyo iPad seyechipiri skrini
Vashandisi vanozokwanisa kushandisa yavo (inoenderana) iPad padivi pe (inoenderana) Mac seyechipiri skrini. Zvichakwanisika kuvhara iyo iPad muMac, kana kuisanganisa zvisina waya uchishandisa Bluetooth uye Kuenderera (iyo renji iri gumi metres). Izvo zvakare zvinodikanwa kuti upinde muakafanana iCloud account - saka iwe unofanirwa kunge uri kushandisa yako wega iPad, haugone kungogovana yako Mac's skrini kune mumwe munhu iPad (isu tinofungidzira kuti ndiyo chengetedzo chiyero).
iPads inoshanda neSidecar inosanganisira:
iPad (chizvarwa chechitanhatu), iPad (chizvarwa chechishanu)
iPad mini (yechishanu chizvarwa), iPad mini 5
iPad Mhepo (chizvarwa chechitatu), iPad Mhepo 3
Macs anoshanda neSidecar anosanganisira:
MacBook Pro (2016 kana kuti gare gare)
MacBook (2016 kana gare gare)
MacBook Air (2018 kana kuti gare gare)
iMac (2016 kana gare gare, pamwe neMac 5K, 27-inch, kunonoka 2015)
Mac mini (2018 kana kuti gare gare)
Mac Pro (2019, painotanga)
Iine iyo iPad yakabatana neMac mushandisi anozokwanisa kuwedzera kechipiri skrini kwavanogona kuwedzera maMac Desktop avo, kana kuonesa kwavo Mac's skrini.
Iwe unozogona kushandisa mbeva kudhonza windows pamusoro pekuratidzwa kwePadad, semuenzaniso. Iwe zvakare uchakwanisa kushandisa iyo Apple Penzura kunongedza uye tinya uye tora, semuenzaniso kana uchishandisa Markup maturusi. Uye zvichave zvinokwanisika kutora mukana wekubata-kwakawanda kubata kune iyo iPad uye nyowani mameseji edhisheni ekutsikisa echinhu icho.
Iyi inogona kunge iri yepedyo isu tichave tichisvika kune inobata skrini Mac (kunze kwekunge yagonesa Apple icho chinofanirwa kunge chiri chinhu.)
Paunenge wakabatana neMac yako nenzira iyi unozogona kushandisa chero ako Mac maapp pane ako iPad sekunge yaive ichimhanya macOS.
Iwe haugone kugovera iyo iPad skrini pane iyo Mac kuratidza - izvi zvinongoshanda chete kubva mukati meMacOS saka hazvisi kuzokutendera iwe kushandisa iOS pane Mac yako.
Idzi dzinogona kunge dziri nhau dzakaipa kune vanogadzira avo vanogadzirisa izvo parizvino zvinoita kuti iyo iPad ishandiswe nenzira iyi, asi ichakwidza kune vashandisi veMac zvakare vane yavo iPad uye vanoda yechipiri kuratidzwa kwavanogona kutakura vakatenderedza.
Idzo zvakare nhau dzakaipa kana Mac yako isingatsigire chimiro. Zvinosuwisa, zvakachengeterwa post-2016 Macs, mune dzimwe nguva 2018.
Shandisa iPad neApple Penzura sehwendefa remifananidzo
Kumwe kushandiswa kweiyo iPad nenzira iyi kungave kwakafanana nemashandisirwo anoitwa Mac mushandisi weWacom piritsi.
Vashandisi vekugadzira vanozokwanisa kushandisa yavo iPad sehwendefa remifananidzo ivo vachishandisa iwo maapplication akanyorwa pazasi.
Kana iyo iPad yakabatana neMac ichishandisa Sidecar ichawana Sidebar, ichipa mukana wekudzora uye mapfupi. Iwe zvakare uchawana mhando yeTouch Bar (sekuonekwa paMacBook Pro) pazasi peiyo iPad skrini.
Ndeapi maPads anoshanda neSidecar
Sidecar ichashanda neinotevera iPads inomhanya iPadOS 13:
iPad (6th chizvarwa)
iPad (5th chizvarwa)
iPad mini (5th chizvarwa)
iPad Air (chizvarwa che3rd)
Ndeapi maapplication anoshanda neSidecar
Vagadziri havafanirwe kuita chero chinhu kuwedzera Sidecar rutsigiro kune avo maapp, inongofanira kushanda, kunyangwe ivo vangangoda kuvaka mune kumwe kushanda kuti vatore mukana weiyo iPad inobata skrini uye Apple Penzura.
Zvirongwa zvinoda kumberi stylus rutsigiro zvinogona kushandisa Tablet Zviitiko muAppKit kugonesa kumanikidza uye kurerekera kweApple Penzura. Vagadziri vanogona zvakare kudoma tsika yechinyakare-yekudonha padivi peApple Penzura.
Apple yakazivisa kuti anotevera maapplication atove kushanda neSidecar:
Affinity Mufananidzo & Affinity Dhizaini
Kwekupedzisira Cheka Pro
Dhizaini Dhizaini & Wezvinhu Muvezi
Zvitsva uye zvakagadziridzwa maapps muCatalina
Sezvatakambotaura pamusoro apa, Apple yakazobvisa iyo yakazara iTunes app uye pachinzvimbo ichi iri kupa matatu akasiyana evaraidzo akatarisana nemaapplication ayo anozozivikanwa kubva kuIOS: Music, TV nePodcasts Mamwe maapplication kuwana iyo yakakosha yekuvandudza inosanganisira Mifananidzo, Safari, Tsamba, Zviyeuchidzo, uye ScreenTime.
Kana Apple ikaisa tarisiro pane ayo marongero ekutanga kutepfenyura ayo anoratidza gare gare gore rino (verenga zvakawanda nezve Apple's TV + sevhisi pano) Apple yakaratidza zvakare kuti iyo TV app ichasvika paMac. Pakutanga zvaive zvichikwanisika kutarisa mafirimu akatengwa kana kubhadharwa kubva kuTunes Store mukati meTunes app, asi hapana humiro hunowanikwa muTV app, kusanganisira nzira iyo inosangana nemamwe masevhisi ekushambadzira.
Iye zvino, kungofanana neApple app paIOS, uchave nekwaniso kune zvese zvauri kutarisa paTV app pane chero ako Apple zvishandiso (kana zvimwe zvishandiso zvine app yeTV) kuburikidza neKupfuura Inotevera saka iwe unozogona kuenderera mberi kubva kwawakasiya.
Pachavewo nemazano muWatch Izvozvi zvichibva pane ako maitiro ekuona uye nemaonero eboka reApple revapepeti. Iyo terevhizheni yeApple ichaisawo maApple TV chiteshi - saka haufanire kuisa akapatsanura maapplication kuti uone ako aunofarira anoratidza.
Uchave uchikwanisa kuwana zviuru zana zvemafirimu eTunes uye maTV kuti utenge kana kubvarura asi vashandisi vanozowanawo zvese zvemukati kubva kuApple TV +. Izvi ndizvo zvinoratidza zviri kuuya kuApple TV +.
Kana uine Mac ichangoburwa ichave skrini hombe yekuona mashura uye mafirimu pa. Kubva 2018 maMacs matsva akasanganisira rutsigiro rwe4K HDR uye Dolby Atmos kutamba. Apple inoti: "4K, 4K HDR, 4K Dolby Vision, Dolby Atmos, uye HDR10 zvemukati zvinowanikwa pane ese Mac modhi akaunzwa mu2018 kana gare gare ne4K-resolution skrini"
Izvo hazvina kushamisika kuti Apple yakazivisa hurongwa hwayo hwekuparadza iyo Mac vhezheni yeTunes, yayo yakanyanya kubhuroka manejimendi manejimendi uye jukebox app.
Kufona kweTunes kuti kudzorerwe kwave kuenderera mberi. Pamberi peWWDC 2016, runyerekupe rwakaratidza kuti iTunes yaizogadziriswazve zvizere kuti zvive nyore kushandisa, asi izvi hazvina kumboitika uye makore matatu gare gare iTunes iri mukuda kwakanyanya kwekugadzirisa.
Nhau dzakanaka ndedzekuti nekuti iyo yeMusic app iri paMac inongotarisa pamimhanzi - pane kungoita zvimwe zvinhu zvakawanda (kusanganisira kuyananisa, izvo zvino zvichagadziriswa kuburikidza neiyo Finder) - hazvizove zvakapetana uye zvakaoma seTunes parizvino.
Vateveri veTunes vacharamba vaine maraibhurari avo (ayo pasina mubvunzo anodzokera kumashure makore mashoma) uye vanyoreri veApple Music vanozogona kuteerera chero chinhu mukatalog yakakura yeApple.
Iyo nyowani yekutaridzika app ine yakachena dhizaini uye yakajeka kupfuura iTunes parizvino - kunyangwe ndiani anoziva kuti ichataridzika sei kana nhaka yako iTunes raibhurari ichipinzwa mune iyo nyowani app.
Mamwe mashoma mamwe maMusic maficha atinoda anosanganisira:
Verenga mazwi acho paunenge uchiteerera kurwiyo (tiri kufungidzira kugona uku nekuda kweApple Shazam kutora)
Zvirinani kutonga pamusoro pemumhanzi uchazotevera
Zvitsva zvekutsvaga zvinoita kuti zvive nyore kuwana rwiyo muraibhurari yako
Verenga pamusoro pei nyowani Mac Music app pano.
Unogona kusaziva izvi asi pane zviripo 700,000 zvinoratidzwa muApple's Podcast katarogu. Kana iyo app nyowani ikatangisa ichave iine akasiyana maficha maficha ekuti uwane izvi zviratidzike nyore
Semuenzaniso, pachave nemapato matsva uye akaunganidzwa akaunganidzwa akaiswa pamwechete nevapepeti pasirese.Pachave zvakare nechave Chikamu cheTrending chevakakurumbira showo uye Top Chati.
Vashandisi vanozokwanisawo kutsvaga zvimwe zvemukati, senge imwe show, musoro wenyaya, muyenzi, kana muenzi. Muchokwadi, Apple yakati iyo Podcasts app inoshandisa muchina kudzidza kunongedza zvakataurwa zvemapodcast kusimudzira kutsvaga.
Paunenge iwe wawana ratidziro yaunoda iwe unogona kunyorera uye kuziviswa nekukurumidza kana nyowani nyowani dzave kuwanikwa, dhawunirodha zvikamu. Iwe zvakare uchakwanisa kutora kubva kwawakasiya pane imwe kifaa - iwe unowana iyo episode iwe yawanga uchinyorera kuenda kuburikidza ne Teerera Ikozvino tebhu.
Pakutanga vashandisi veMac vaifanira kupinda paICloud kuti vashandise iyo Tsvaga Sevhisi yangu, kuti uwane iPhone, yakarasika Mac, kana chimwe chigadzirwa cheApple. Kwete iyo Mac ine yayo Tsvaga App yangu. Asi kune zvinopfuura kungove nyowani app muCatalina. Pane zvinhu zvitsva zvinoita zvinogoneka kuona chishandiso chakavharwa uye chisiri pamhepo, sekuwanda kwakarasika kana kubiwa MacBooks.
KuWWDC, Apple yakatsanangura kuti Tsvaga Yangu inogona sei kuwana Apple zvishandiso kunyangwe vari kunze kwenyika nekushandisa Bluetooth kutumira masaini anogona kutorwa nemidziyo iri padhuze. Nzvimbo yaro inogona kudzoserwa kwauri. Izvi zvese zvakavharidzirwa uye hazvizivikanwe uye nekuti zvinongova zvenguruve kumashure kumadiki madhata e data hazvizoshandise bhatiri kana kumisikidza pane yako data mvumo. Iyo iri nzira yekutsvagisa-kunotora nzvimbo yako kifaa.
Ichi chingori chinhu chimwe chakanangana nekugadzira Mac isinganyanye kukwezva kune mbavha. Chimwe chiitiko chitsva ndeye Activation Lock (iyo inongoshanda chete kana Mac yako iine T2 chip). Activation Lock zvinoreva kuti mbavha haizombokwanisa kubhowa Mac yako - chete iwe unogona kuitisa Mac yako ne password.
Tsvaga Yangu zvakare inosanganisira Tsvaga Shamwari Dzangu kuti iwe ugone kuishandisa kuwana marashiro ekushandisa pamwe nekutsvaga vako vakaroora (zvinobatsira kana mumwe wavo achiitika kuve neMac yako).
Chinovhara Nguva & Yevabereki Kudzora
Screen nguva yasvikawo paMac, ichikupa ruzivo rwekuti inguvai yaunoshandisa mumaapps uye pawebhu pauri Mac pamwe neiyo iPad yako uye iPhone - iwe unozokwanisa kuwana marepoti anoverenga nguva yakashandiswa pamaapp uye mawebhusaiti pane ako ese zvigadzirwa.
Iwe unozogona kushandisa Screen Nguva kuronga nguva kure neMac futi, kana kugadzira Miganho kuitira kuti mamwe maapplication asakwanise kushandiswa kunze kwenguva yakatarwa. Akasanganiswa Mireza inogona kuve mapoka emaapp, senge mitambo kana varaidzo.
MuCatalina iwe unogona zvakare kubata ese ako emidziyo emhuri kubva kuScreen Nguva pane yako Mac, kuronga nguva yekuzorora, kumisikidza app maganho uye kusarudza kuti ndeapi mawebhusaiti anogona kuwanikwa pane akasiyana. Iwe unogona zvakare kudzora kuti ndiani vana vako vanogona kutaurirana navo kuburikidza nemidziyo yavo nekugadzirisa yavo yekutaurirana runyorwa - uye zvakanyanya, iwe unogona kusarudza kuti iwe unogona kugara uchisvika kwavari kunyangwe panguva yekuzorora.
Nguva yako isati yakwana uye muganho wave kuda kukanda mauri uchaona yambiro 'Imwezve miniti', iyo inokutendera kuti uchengetedze zvawanga uchishanda kana kubuda kunze usati wadzingwa muapp.
Mune ma OSs apfuura takanzwa kuti Mifananidzo inogona kunge yakanyongana, izere izere nemifananidzo yakafanana mudiki fomati fomati, inogona kumbomira kuisa. Iyo nyowani vhezheni yeMifananidzo inozivisa nzira nyowani yekuratidza mafoto uye mavhidhiyo masikati, mwedzi uye gore. Kutarisa kuchave kwakakura uye mapikicha anoshandisa AI kuratidza mapikicha kubva pamazuva ekuzvarwa, mazororo uye mhemberero.
Iwe unozokwanisa kutarisa ako Mapikicha neMasikati, Mwedzi uye Gore sezvaunogona izvozvi, asi fomati nyowani icharatidza zvirinani mifananidzo nevhidhiyo, kuongorora mifananidzo kuratidza chikamu chakanakisa chemufananidzo, iwe zvakare unokwanisa kuzomira mukati kuti utore hombe kutarisisa kana kusarudza kuti utarise mapikicha mukwere kana fomati yekutanga. Vhidhiyo nePamoyo mapikicha zvakare anozozvitamba.
Isu takanetseka kuti izvi zvinogona kuperetera kupera kweMemory, chinova chimwe chezvinhu zvatinoda zveMifananidzo (heino maitiro ekuita makuru Ndangariro Mafirimu pane yako iPhone) asi ndangariro Mafirimu achawana kumwe mashandiro matsva paMac, kuwana kugona kugadzirisa iyo nguva, manzwiro, uye zita remufirimu wako kana slideshow. Aya maratidziro anoenderana kune ako mamwe majaira kuburikidza neICloud Mifananidzo.
Iyo nyowani vhezheni yeSafari - iyo yakasvika neCatalina, asi inowanikwawo neMojave neHigh Sierra, ine peji nyowani yekutanga ine Siri Mazano zvinoenderana nenzvimbo dzinowanzo shanyirwa, mabhukumaki, iCloud tabo, Yekuverenga Chinyorwa kusarudzwa uye zvinongedzo zvinotumirwa muMessage.
Iwe zvakare unotanga kuona isina kusimba password kunyeverwa uye mazano emamwe mapassword
Imwe shanduko: kana iwe ukatanga kutaipa kero yewebhusaiti iwe yawakatovhura mune imwe tebhu, Safari inokuendesa kune iyo yakatovhurika tebhu. Hatina chokwadi chekuti izvi zvichatamba sei parizvino, sezvo vamwe vanhu vangangoda mapeji mazhinji kuvhurika pane imwe webhusaiti.
Chekupedzisira, iwe unozokwanisa kugonesa PiP (Mufananidzo muPikicha) kuburikidza neiyo odhiyo bhatani pane Safari tebhu.
Kune akati wandei maficha maficha muMail ayo anozokubatsira iwe kuti inbox yako izere izere nemameseji zvinyorwa uye nezvimwe.
Vashandisi vanozokwanisa kuvharira ese maemail kubva kune chaiye anotumira uye kufambisa yavo yese mameseji kune marara. Kuti uwane chinhu ichi iwe unofanirwa kungodzvanya pane sezita revatumira mumusoro weemail. Zvinonzwika sekunge iwe hauchazomboda kuzvinyoresa zvakare.
Kutaura nezvazvo, kana iwe uchida kuzvinyoresa nenzira kwayo, iyo Unsubscribe link iyo inowanzo kuoneka pazasi peemail ichaendeswa kumusoro kwemusoro weemail kuti ugone kuzvinyora nyore nyore.
Zvimwe zvinhu zvitsva zvinosanganisira kugona kunyarara tambo yakanyanyisa kushanda uye kurega kuziviswa nguva dzese kana mumwe munhu achipindura.
Pachave zvakare nekuvandudzwa kumarongero eMail, nekutarisisa kwemeseji kurudyi.
Manotsi ane dzimwe shanduko dzinozoita kuti uwane imwe notisi ive nyore. Iwe uchaona ekutsvaga mazano, uye maNotes achawana nyowani Yekutarisa kweGallari iyo yakagadzirirwa kuti zvive nyore kuona chinyorwa chauri kutsvaga. Aya maonero acharatidza zvese zvawanyora sezviratidzo zvekuona. Hatina chokwadi chekuti izvi zvichashanda sei sezvo mazhinji manotsi edu ari ezvitoro zvekutenga, zvinongedzo kumawebhusaiti, uye, zvakanaka, zvinyorwa, asi zvinogona kutikurudzira kushandisa manotsi ezvimwe zvinhu.
Kwemakore mashoma ikozvino zvave kugona kuongorora zvinhu pane iyo iPhone uchishandisa manotsi, muCatalina manotsi anozokwanisa kushandisa Optical hunhu kuzivikanwa kuziva mazwi uye zvakare kuziva zvinhu mumifananidzo. Izvo zvinofanirwa kubatsirawo nekutsvaga.
Iko kune zvakare kwakagadziriswa sarudzo dzekudyidzana, kusanganisira akagovaniswa maforodha. Uye iwe unozogona kugovana zvinhu sekuverenga chete, kuti zvisakwanise kugadziriswa.
Pachave nesarudzo nyowani yekutarisa inozofambisa zvinhu zvako zvese zvapedza kuzasi kweiyo runyorwa, uye uncheck sarudzo dzese kuti iwe ugone kushandisa yako runyorwa zvakare (zano rakanaka kudaro!)
Iyo Yekuyeuchidza interface irikuwana kuwedzeredza, kurerutsa zvisikwa uye kuteedzera kwezviyeuchidzo. Iwe unozogona kuronga zviyeuchidzo zvako zviri kuuya muzvikamu zvakaita nhasi, zvakarongwa, uye zvese, uye zvichave zvichikwanisika kugadzirisa zviyeuchidzo zvine gumi nemaviri uye 12 zviratidzo.
Zvimwe zvinhu zvitsva zvinosanganisira bar rinokurumidza kuitira kuti zvive nyore uye nekukurumidza kuwedzera nguva yakatarwa, iwe unozogona kuwedzera zvinongedzo zvakaita sewebhusaiti kana pikicha kune chiyeuchidzo, tag vanhu muchiyeuchidzo - uye tora chiyeuchidzo chekuzivisa iwe inotevera nguva yaunenge uchivatumira mameseji. Iwe zvakare uchaona Siri mazano ezviyeuchidzo zvichibva pane ako mameseji. Izvo zvakare zvichave zvinokwanisika kurongedza akati wandei emabasa pasi peyepamusoro-chikamu chiyeuchidzo.
Tainetseka kuti QuickTime Player inogona kusazopona mushure mekunge Apple yawedzera vhidhiyo yekukanda sarudzo kuMac kuburikidza Command + Shift + 5 muMojave. Pamberi peMojave QuickTime yaive nzira yakanakisa yekunyora skrini yako. Iye zvino muCatalina QuickTime iri kuwana akati wandei maficha.
Iyo inotinakidza isu zvakanyanya: iwe uchave unokwanisa kugadzira iyo H.264, HEVC, kana ProRes-encoded bhaisikopo faira nekuenda kune iyo folda yemitezo yakateedzana mifananidzo, wobva wasarudza yako yaunoda resolution, furemu rate, uye encoding mhando .
Zvimwe zvinhu zvitsva zvinosanganisira PiP kuitira kuti iwe ugone kutamba vhidhiyo muhwindo risina kuvharirwa neimwe windows, uye iyo Movie Inspector pane ichapa rumwe ruzivo nezve vhidhiyo.
Iyo Home app ichashanda neKeKKit Yakachengeteka Vhidhiyo kuitira kuti iwe ugone kuona zvakachengetedzwa zvakanyorwa vhidhiyo yakawanikwa neKeKKit-inogoneswa kamera pane yako Mac.
iPad Apps Kuuya kuMac
Takatotaura nezve Apple's Project Catalyst, iyo inofanirwa kuona akawanda maapplication eIOS vachienda kuMac. Parizvino zvinotevera zvaziviswa:
Asphalt 9 Ngano
Zvimwe zvinhu zvitsva muCatalina
Apple yakaratidzawo zvimwe zvimwe zvekuvandudza zvinouya kuMac muCatalina kusanganisira zvitsva zvekuwanika maficha uye chengetedzo uye zvakavanzika zvinowedzera. Mamwe mashoko pazasi.
Kuwanika & Kudzora kwezwi
Nyowani Yezwi kudzora maficha ichaita kuti zvikwanise kudzora Mac zvachose nezwi rako, zvinova zvinobatsira kune avo vasingakwanise kushandisa echinyakare zvigadzirwa zvekushandisa kudzora maMac (iwo mamwe mazwi ezwi kudzora sarudzo achave achiwanikwa pane iOS zvishandiso zvakare) .
Kudzora kwezwi kunoshandisa Siri yekuziva kutaura uye inosanganisira yakasarudzika mameseji ekugadzirisa sarudzo ayo anogona kumisikidzwa kushandisa ako echinyakare mazwi. Kurayira kwakareruka, saka, semuenzaniso, iwe ungati: "Tsiva 'Ini ndoda kusvika' na 'Ndasvika'", kana iwe ungati "chinja ndoda" uye iwe uchaona rondedzero yeanotsiva kutsiva, kusanganisira emoji.
Kuti ugone kudzora Mac nezwi rako riri nyore, iwe unozokwanisa kufamba neapps nekureva kune akanyorwa mavara anowoneka padhuze nezvinhu zvinodzvanya, kana nekunongedzera kunongedzo kune gridhi iyo inogona kubatsira kuratidza dzimwe nzvimbo pachiratidziri.
Zvimwe zvinhu zvitsva zvekuwanika zvinosanganisira kugona kuswededza mukati mameseji nekumhanyisa pamusoro payo nekudzvanya kiyi Yekutonga. Izvo zvakare zvichave zvinogoneka kusarudza kubva nyowani marara firita sarudzo dzingaite kuti skrini ive nyore kuverenga.
Kuchave nekumwe shanduko munzira iwe yaunogona kuwana yako apple account kuburikidza neMac yako. Iwe unozokwanisa kusvika kune yako Apple ID info kuburikidza neSystem Preferences kuti uwane kuwana kune account account, chengetedzo ruzivo, kubhadhara uye kutumira ruzivo, uye nezvimwe.
Iwe zvakare unokwanisa kuongorora uye kugadzirisa iCloud marongero, maneja kana kukwidziridza yako yekuchengetedza chirongwa, uye woona kunyorera kwako (uye iwo ari kugoverwa kuburikidza neMhuri Kugovana).
Mukuwedzera iwe uchaona runyorwa rweese madhizaini akasainwa muaccount yako, kusanganisira pavakapedzisira kutsigirwa uye yavo Tsvaga Yangu mamiriro.
Mumakore achangodarika kuchengeta Time Machine back up kwave kushomeka zvishoma nekuti zvakawanda zvemukati medu zvava kuchengetwa muICloud uye zvakare nekuti nekuda kweiyo nyowani Apple File System (APFS) yakasvika muHigh Sierra iyo macOS inotora Snapshot ye file system pane yako Mac pane dzimwe nguva, zvinoreva kuti kana iwe uchangobva kuvandudza software paMac yako uye ukaona isingaenderane, iwe unozokwanisa Kudzorera Kubva paSnapshot uye kudzoreredza muchina nenzira iyo yaive isati yagadziriswa .
Apple ine akati wandei ekuchengetedza matanho akavakirwa mukati macOS. Imwe yeaya ndeye Muchengeti weGate uye muCatalina Muchengeti Wamasuo achawana mukana wekutarisa maapplication ezvekuchengetedza nyaya kana iwe waaisa uye nguva nenguva mushure.
Zvimwe zvinhu zvitsva zvekuchengetedza zvinosanganisira:
Zvirongwa zvichazodiwa kuti uwane mvumo usati wawana zvinyorwa zveMushandisi uye Desktop mafolda, iCloud nemavhoriyamu ekunze, maforodha echitatu-bato gore vanochengeta vanopa, midhiya inobviswa, uye mavhoriyamu ekunze
Vashandisi veMac vanozokurudzirwa purogiramu isati yatora chiitiko chekhibhodi kana kutora skrini kana vhidhiyo yechiratidziri.
Pachave neakazvitsaurira system vhoriyamu yakaparadzana zvachose kubva kune imwe dhata pane iyo Mac, saka hazvingakwanise kunyora mafaira system.
Zvishandiso zvemidziyo zvakambomhanya kodhi mune macOS vachishandisa kernel yekuwedzera, muCatalina inomhanya yakaparadzana neiyo OS, saka haigone kukanganisa macOS chimwe chinhu chinokanganisika.
Takatotaura Tsvaga Yangu pamusoro uye iyo T2 chip inofambiswa Activation Lock. Idzi gadziridzo dzinosimudzira kuchengetedzeka nekuita kuti zvikwanise kuti mbavha iwane data rako.
Kuti uwane maitiro ekuchengeta yako Mac kubva kunjodzi yekuchengetedzwa verenga: Maitiro ekumisa yako iPhone, iPad kana Mac kuwana hacked uye vedu Mac ekuchengetedza matipi.
Kwemakore mashoma ikozvino Apple yanga ichinyevera kuti rutsigiro rwema32-bit maapps paMac angave achipera. Mojave yaive yekupedzisira macOS kuburitswa kutsigira 32-bit maapplication. Chete mafomu ari makumi matanhatu neshanu ndiwo achamhanya mune inotevera vhezheni yeMacOS. Tsvaga maapplication api asingashande muCatalina pano.
Iyi haifanire kunge iri nyaya hombe. Vagadziri vanga vachivandudza maapplication avo zvichitevera yambiro yeApple uye maapps matsva akaendeswa kuMac App Store ave achidikanwa kutsigira 64-bit kubva muna Ndira 2018, uye Mac app kugadzirisa uye maapps aripo ave achidikanwa kutsigira 64-bit kubva muna Chikumi 2018. ” Nekudaro, vanhu vachiri vangangodaro vachishandisa shanduro dzekare dzeapp. Kana iwe uri saka inogona kunge iri nguva yekutora nyowani uye kugadzirisa kune nyowani vhezheni yemapurogiramu ako.
Nguva yekupedzisira paine kusagadzikana kukuru maererano nemaapps anga asiri anoenderana ndipo Apple payakamira kutumira Rosetta muMac OS X 10.7 Shumba. Rosetta chishandiso chaApple chekushandura maapplication kuti amhanye pane Intel processor. Apple payakatanga kutamira kuIntel, Rosetta akashanda kududzira mafaera enhoroondo, asi zvichitevera kuburitswa kweshumba iwo maapplication ekare aive asisina kutsigirwa.
Heano maitiro ekutarisa Mac yako kuti uone kana iwe uri kushandisa chero makumi matatu nemasere -application:
Enda kuApple Menyu
Nezve Ino Mac
Tarisa mukoramu yekupedzisira kuti uone kana iri 64-bit application.
Heano mamwe emamwe asiri-makumi matanhatu nematanhatu maapplication angave chikonzero chekushushikana:
Gadziridza kune eazvino vhezheni pano.
Microsoft Shoko 2011
Tsigiro yeHofisi 2011 yeMac yakapera musi wa10 Gumiguru 2017. Kunyangwe iwe uchimhanyisa Office 2016 yeMac unofanirwa kugadzirisa kune vhezheni 15.35 kana gare gare. Gadziridza kune yazvino vhezheni yeMicrosoft Office pano.
Kune zvekare mamwe maapplication eApple asisiri kushanda. Apple yaiwanzobatanidza akawanda maapplication neFinal Cut Studio uye Logic Studio, ese ari maviri akamiswa uye akatsiviwa naFinal Cut Pro X uye Logic Pro X muna 2011. Kana iwe uchiri kushandisa aya masutu ekare ziva kuti hapana chimwe cheizvi chakasungwa. maapplication, ayo aisanganisira DVD Studio Pro, Soundtrack Pro, Ruvara, Cinema Zvishandiso, nezvimwe, zvinoshanda.
Dai iwe wakagadziridza kuFinal Cut Pro X uye Logic Pro X hausi hako kunze kwemvura. Shanduro dzinotevera chete ndidzo dzinozowirirana, saka kana iwe uchimhanyisa vhezheni yechinyakare kupfuura iya dzakanyorwa pazasi iwe uchafanirwa kugadzirisa. Iwe unogona kugadzirisa kune dzazvino vhezheni paMac App Chitoro, zvinongedzo pazasi.
Final Cut Pro X 10.3.4 - Gadziridza kune yazvino vhezheni yeFinal Cut Pro pano
Motion 5.3.2 - Gadziridza kune yazvino vhezheni yeMotion pano
Compressor 4.3.2 - Gadziridza kune yazvino vhezheni yeCompression pano
Logic Pro X 10.3.1 - Gadziridza kune yazvino vhezheni yeLogic pano
MainStage 3.3 - Gadziridza kune yazvino vhezheni ye MainStage pano
Sisitimu inodiwa yemacOS 10.15 Catalina
Catalina inotsigirwa pane anotevera Macs:
MacBook Air mamodheru kubva pakati pa2012 kana gare gare
MacBook Pro mamodheru kubva pakati pa2012 kana gare gare
Mac mini mamodheru kubva kunopera 2012 kana gare gare
iMac mamodheru kubva kunopera 2012 kana gare gare
Mac Pro mamodheru kubva kunopera kwegore ra2013
Mojave yakatsigira yepakati pegore ra2010 kana pakati pa2012 Mac Pro mamodheru ane mamwe maMetro-anokwanisa magirafu processor, zvinosuwisa, Catalina haadaro.
Simbi ndiyo yaive kiyi pano - maMac anga asina Metal rutsigiro akadonhedzwa mushure meHigh Sierra. Izvo zvinokwanisika kuti eGPU rutsigiro inogona kuwedzera hupenyu hwevakuru maMac hazvo. Izvo zvinogoneka ku gadza Catalina pane mukuru Mac zvakadaro...
Mashandisiro aungaita iCloud kuchengetedza Mac yako